Eco-Inoshamwaridza YeMotokari Microfiber Suede Leather yeChigaro
Easy Kuisa Universal Auto Leather Seat Protec ...
Yakasimba uye Inodzivirira TPE Mota tsoka Mats ane Nhema ...
Maitiro Akasiyana-siyana eMota Floor Mats Raw Material
Nhema Faux Suede Mota Yemukati Machira Ezvinhu
Automotive Microfiber chakaita zvokugadzirwa Leather In nzungu Bu ...
Mugadziri China Suede Kunzwa Solvent-Mahara Mic ...
High Quality Auto Microfiber Leather pamwe Competitiv ...
Eco-inoshamwaridzana YeMotokari Microfiber Leather yeMotokari M ...
YeMota machira emukati machira ane akaomesesa zvinodiwa maererano neanti-fouling, murazvo unodzora, anti-static, kupenya kwezuva, nyore kuchenesa, nezvimwe. Muzvigaro, mudhiraivho uye zvimwe zvikamu zvinosangana nemuviri wemunhu zvinoda nyaradzo uye runako uye mukurumari.
Ichi chinyorwa chine pfungwa yekirasi isiri yakaderera kune yeganda, asi zvakare ine coefficient yekukwesana iyo isingaenzaniswi neganda. Kana ikashandiswa pachigaro, inogona kudzivirira mutumbi wemutyairi kubva mukutsvedza nechigaro kana uchityaira zvine hukasha, ichipa mutyairi ruzivo rwekutyaira zvirinani, panguva imwe chete, mhando iyi yezvinhu zvakare ine yakasimba kusakara kuramba uye murazvo unodzora, senge isina-nemaune kuparadzwa, chinyorwa ichi chinenge chisipo chero chiratidzo chekweguru, chino chinhu munguva yechando kudziya uye zhizha kutonhorera panguva imwechete zvakanyanya kureruka.
Inofananidzwa neyakajairwa jira kana jira reganda, iwo ruvara rwakazara, kutaridzika kwepamusoro-giredhi, ine kubata kwakapfava uye kwakapfava, kuwedzera kusimbisa pfungwa yeumbozha, kuwedzera kune alcantara yekutsiva zvinhu kusimba pane dehwe, yakakwira coefficient yekukwesana , kunyanya inokodzera kushandiswa pachigaro, iko kwekushandisa kwemazuva ese hakuzoonekwa kusakara nekubvaruka. Kunyangwe nguva nenguva nesimbi yezvinhu kuonana ichiri kupenya senge nyowani. Stain kuramba yakasimba kwazvo (ine rag zvinyoro nyoro inogona kudzima kofi kana muto), kupisa moto kuita kuri nani pane echisikigo dehwe.
1. Kubata zvakapfava, kugadzirwa kwoumbozha.
2.Simba rakasimba kukasira, kwete nyore kupera, ine akasiyana mavara akaomesesa.
3.Possess yakagadzikana kufema uye nyore kutarisirwa kuchenesa.
4. Inokodzera zvigadzirwa zvakasiyana siyana uye zvinoshandiswa, zvakaita sedenga remotokari, zvigaro zvemotokari, mavhiri emota, nezvimwe.
5. Ine basa rekudziya munguva yechando uye inotonhorera muzhizha.
6. Zvigadzirwa zvemvura, kuwana chaiyo isina kukuvadza kuhutano hwevanhu.
Pashure: Hydrolysis Resistant Waterproof Suede PU Yakagadzirwa Microfiber Leather
Zvadaro: Yakanaka Hunhu Auto Auto Suede Mucheka PU Microfiber Leather
Mota faux suede
Fax Suede Leather
Suede Chinyorwa CheMotokari Musoro Wemusoro
100% PU Microfiber Leather Mukati Mota Upholstery
Chakagadzirwa PVC Leather Vegan PVC Leather Compet ...
54/55 Inch Width Synthetic PVC Leather yeMotokari ...
Grey Microfiber Leather yeCar Seat Chivharo
Nonwoven Microfiber Suede Eco chakaita zvokugadzirwa Leather ...